အရမ်းစပ်နေတဲ့အခါ သက်သာစေဖို့ - Hello Sayarwon
စပ်စပ်လေးမှ ခံတွင်းတွေ့တယ်ဆိုပြီးစားတယ်။ စားပြီးတဲ့အခါ အရမ်းစပ်ရင်လည်း နေမထိထိုင်မသာနဲ့။ တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်ဆိုးလာတာတောင် ရှိတယ်လေ။ ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့ အရမ်းစပ်တဲ့အခါ မြန်မြန်လေး သက်သာစေဖို့ ဘာတွေများလုပ်ရမလဲ တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်။
အရမ်းစပ်တဲ့အခါ သက်သာစေဖို့ ဒီနည်းလေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါ
စပ်တဲ့အရသာက ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် အပူအစပ်တွေ စားပြီးတဲ့အခါ ပြင်းပြင်းရှရှ ပူစပ်တာကတော်တော်လေး ခံရခက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ခံတွင်းတွေ့စရာ ပူပူစပ်စပ် ဟင်းလျာလေးတွေ စားပြီးတိုင်း အစပ်သက်သာစေဖို့ဆိုရင်
နို့ နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း စားပေးပါ
အရမ်းစပ်နေတဲ့အခါ နို့အေးအေးလေး တစ်ခွက်လောက် သောက်လိုက်တာ၊ ဒိန်ချဉ် တစ်ဇွန်းလောက် စားလိုက်တာက သိသိသာသာ အစပ် သက်သာစေမှာပါ။ နို့ နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာပါတဲ့ casein လို့ခေါ်တဲ့ ပရိုတင်းက ပူစပ်တဲ့ ခံစားမှုကို သက်သာစေဖို့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ နို့ နဲ့ နို့ထွက် ပစ္စည်းတွေက ပူစပ်တဲ့ ခံစားမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ capsaicin ကို ပါးစပ်ထဲမှာရှိတဲ့ ပူစပ်တာကို အာရုံခံတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဆီမရောက်အောင် ကာကွယ်ပေးတာ​ကြောင့် ပူစပ်မှုကို သက်သာစေမှာပါ။
ဒါကြောင့် အစပ်တွေ စားပြီး အရမ်းစပ် တဲ့အခါမျိုးမှာ ရေသောက်တာထက် နို့အေး တစ်ခွက်လောက် သောက်ချလိုက်တာ၊ ဒိန်ချဉ် တစ်ဇွန်းလောက် စားချလိုက်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
ဒါကတော့ တော်တော်များများ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အရမ်းစပ်တဲ့အခါ သ​ကြားစားတာ၊ သကြားလုံး စားတာ၊ ထန်းလျက် ဝါးတာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ သကြားက လျှာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ ပူစပ်နေတဲ့ ခံစားမှုကို အမြန်ဆုံး သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းစပ်တဲ့အခါ လျှာပေါ်ကို သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်စာလောက် တင်ထားလိုက်ရုံပါ။
ပျားရည်က သဘာဝ အချိုစာလေးပါ။ ဆေးဖက်ဝင်သလို အစပ်ပြေစေဖို့လည်း အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ စပ်တဲ့ခံစားမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ capsaicin ကို လျင်လျင်မြန်မြန် စုပ်ယူပေးပြီး ပူစပ်တဲ့ ခံစားမှုကို မြန်မြန်လေး သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းစပ်တဲ့အခါ ပျားရည်လေး စားပေးပါ။
ကစီဓာတ်ပါတဲ့ ပေါင်မုန့်၊ ထမင်းစတာတွေက အစပ်ပြေစေဖို့ အကောင်းဆုံး အကူအညီပေးနိုင်သူတွေပါ။ အရမ်းစပ်နေတဲ့အခါ ပေါင်မုန့်ကြမ်း အလွတ်တစ်ချပ်ကို ဝါးစားလိုက်တာ၊ ထမင်းဖြူ တစ်လုတ်လောက် ကောက်ဝါးလိုက်တာက သင့်ကို အစပ်ပြေစေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါတွေအပြင် အာလူးပြုတ်စားပေးတာကလည်း အစပ်သက်သာစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်မှာပါ။
အရမ်းစပ်တဲ့အခါ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သံပုရာသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ နာနတ်သီးတို့လို အသီးမျိုးတွေကို စားပေးပါ။ ဒါတွေက အစပ်သက်သာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရမ်းစပ်တဲ့အခါ ခရမ်းချဉ်သီးအစိမ်းကို ရေစင်အောင် ဆေးပြီး ဝါးစားတာ၊ သံပုရာရည် သောက်တာ၊ နာနတ်သီးစိတ် ကောက်ဝါးလိုက်တာ၊ လိမ္မော်သီးစိတ် စားလိုက်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
ကဲ ………… စပ်နေရင် စိတ်တို၊ ရုပ်ပျက်မနေဘဲ ဒီနည်းလေးတွေ စမ်းကြည့်လိုက်နော်။
4 Effective Remedies To Cool Your Mouth After Eating Spicy Food https://food.ndtv.com/food-drinks/4-effective-remedies-to-cool-your-mouth-after-eating-spicy-food-1340250 Accessed Date 28 May 2020
DINNER TOO SPICY?5COOLING TIPS TO TURN DOWN THE HEAT https://foodal.com/knowledge/herbs-spices/turn-down-the-heat/ Accessed Date 28 May 2020
Mouth on Fire? The Best (and Worst) Ways to Get Rid of Spicy https://greatist.com/eat/best-way-to-soothe-burning-mouth Accessed Date 28 May 2020